घरको मुख्यद्वारको बास्तुदोषका कारण घरमा अशान्ति र तनाब हुनसक्छ ! - Lekhapadhi जीवनशैली : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:५४ मा प्रकाशित
५. घरको कुनै पनि बेडरुममा वास बेसिन (हात धुने) हुनु हुँदैन । यस्तो हुँदा दाम्पत्य जीवनमा विश्वासको कमी आउने गर्छ । यदि पहिले नै राखिएको छ भने वास बेसिनको अगाडि पर्दा राख्नुहोस् ।